Aung San Suu Kyi oo laga sii daayay xabsi-guri - BBC Somali
Aung San Suu Kyi oo laga sii daayay xabsi-guri
13 Nofembar 2010
Hogaamiyaha demoqraadiyadda taageersan ee Burma, Aung San Suu Kyi, ayaa la hadashay kumanaan taageerayaasheeda ah oo faraxsan kadib markii laga soo daayay xabsi guri magaalada Rangoon.
Waxaa ay u xirnayd dowladda military-ga.
Taageerayaal farabadan ayaa markii ay gurigeeda ka soo baxday ka hortagay, iyadoo gurigeeda ku xayirnayd todobadii sano ee la soo dhaafay oo ay ku jirtay xabsi ama xabsi guri muddo shan iyo toban sano ah oo ka mid ah labaatan iyo kowgii sano ee ugu dambaysay.
Dhoola-cadayn iyo gacan-lulid kadib ayay taageerayasheeda u sheegtay in ay ka wadashaqeeyaan si wadajir ah in la gaaro hadafkooda.
Weriyaha BBC, ayaa sheegay in aysan cadayn hadii shuruudo lagu xiray sii daynta Aung San Suu Kyi iyo in kale.
Weriyaha ayaa sheegay in aysan suurtagal ahayn in Jeneraalada xukunka haya ay ogolaan lahaayeen sii daynteeda iyo in kale ilaa ay ka dareemeen kalsooni ah in aysan halis iyaga ku ahayn ama qorshaha ay u dajiyeen Burma.
Weriyuhu wuxuu leeyahay maalmaha soo socda ayaa wax la kala ogaan doonaa.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, Ban Ki-moon, ayaa soo dhoweeyay sii daynta Aung San Suu Kyi, kuna baqay dowlada military-ga Burma in ay sii dayso dhamaan maxaabiista siyaasadda.
Madaxwayne Obama ayaa sheegay in Aung San Suu Kyi ay ka mid tahay dadka uu u arko geesiyaasha, ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron wuxuu sheegay in ay tahay qof mudan in lagu wada daydo, oo rumaysan xornimo hadalka, demoqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha.